17 Aug, 2018 - 00:08	 2018-08-16T11:23:49+00:00 2018-08-17T00:00:40+00:00 0 Views
MAKAITA basa veKwayedza, ndakazomuwana ndatambura wandaida saka vachiri kufona pa0772 221 795 chiregedzai.
Makadii henyu veKwayedza? Ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 18 – 26, ini ndine makore 28 uye handinwe mapiritsi. Ndine vana 2 saka ndikawanawo ane 1 zvoita. Nhare yangu 0779 471 084.
Ndoda musikana kana akambororwa wokuroora, akanaka uye ari muHarare ane makore 23 – 25. Nhare dzangu 0777 758 679.
Ini ndiri murume ane makore 34, ndiri bricklayer uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 28 zvichidzika ari HIV positive asi asingataridziki kurwara. Nhare yangu 0715 246 944.
Ndiri kutsvagawo musikana wekuwadzana naye, ane makore 18 zvichienda mberi. Ndine makore 20, ndinonzi Tinashe Chiripano. Nhare yangu 0785 547 311.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 33, ndinotsvagawo murume anondida ane makore 46 zvichidzika ari pachokwadi. Anoenda kuchechi ngaandibate pa0776 182 979.
Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana wekuwadzana naye ane makore 20 kusvika 23. Akanaka andidawo anondibata pa0716 554 898, ndiri kuMhondoro.
Ndiri murume ane makore 26 ndotsvaga musikana kana mudzimai ane mwana 1, ane makore 18 kusvika 20. Ngaave anoda zvekunamata asi pfambi kwete. Ndobatika pa0776 524 483.
Ndiri mukadzi ane makore 43 nevana 4. Anondida ngaandibate pa0779 922 805.
Ndiri murume ane makore 36 nevana 3, HIV negative uye ndotsvagawo mukadzi ari pachokwadi ane vana seni. Ndinoda ane makore 35 zvichidzika. Nhare dzangu 0785 039 642.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 39 nevana 2, ndinoshanda muHarare uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora akavimbika. Ngaave ane vana vake, andia ngaandibate pa0775 396 984.
Makadii henyu veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore makumi matatu okuberekwa uye ndinotsvakawo shamwarikadzi ine makore 30 zvichidzika. Ngaave nemwana mumwe chete kana asina. Ndinobatika pa0713 053 480.
Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana 2, ndodawo murume ane makore 30 – 34 ane vana vakewo asi varume vevanhu kwete. Nhamba dzangu 0785 676 195.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 18 ekuberekwa uye ndinotsvagawo murume ane makore 20 – 26. Andida ngaandibate pa0774 295 443.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ane makore 48 nevana vaviri uye ndotsvakawo mudzimai wekudanana naye ane makore 48 zvichidzika. Ngaandibate pa0776 345 823.
Makadini? Ndinotsvagawo musikana akanaka ane makore 18, ari serious uye mutsvuku mutete. Nhare yangu 0715 688 779 chero nguva.
Ini ndiri mukomana anotya Mwari anonamata ane makore 27 ekuzvarwa. Ndinotsvagawo shamwarisikana yezera rangu. Andifarira ngaafone pa0776 654 923.
Ndiri murume ane makore 40, ndinotsvagawo mukadzi anoda kuroorwa ari HIV negative. Akavimbika anondida anondibata pa0779 288 677.
Ndiri murume ane makore 44 nevana 2, ndoda mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore 38 kusvika 44. Nhare yangu 0775 428 630.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 32, ndinotsvagawo shamwari yekufambidzana nayo. Andifarira anondibata pa0782 321 336.
Ndiri mukadzi ane makore 25, ndinotsvagawo murume ane makore 26 – 35 ari pamushonga. Ndine vana 2, nhare yangu 0773 038 383.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa nevana 3 uye ndiri pamushonga.
Ndinotsvaga mukadzi ari pachokwadi ave kuda zvemba ane makore 18 kusvika 26.
Ngaave ari pamushonga seni uye ndoda asingabereke zvachose anobva Rushinga kana ane mwana 1.
Kunyanya anopinda kwaMwazha ngaandibate pa0716 090 945.
VeKwayedza ndiri mukomana ane makore 23, ndinodawo mukadzi ane makore 20 kusvika 22 kana ane mwana 1. Vanoda zvekutamba kwete, nhare yangu 0775 458 448.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 20, ndinotsvagawo musikana ane makore 18, akavimbika, akanaka, anogeza uye achigara muHarare. Nhare yangu 0776 764 280.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana ane makore 22 zvichidzika ave kudawo zveimba. Asiri pamushonga seni, andifarira anondibata pa0714 096 172.
Makadii zvenyu veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 32 ndogara kuBudiriro muHarare. Ndotsvagawo musikana anoda kuvaka musha neni. Ngaandibate pa0773 789 795.
Makadii? Ndiri murume ane makore 39 ndodawo mukadzi ane mwana 1 kana 2, pahutano ndiri HIV negative. Ngaave ane makore 30 kusvika 35. Nhare yangu 0776 982 872.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa ndotsvagawo murume ari pachokwadi asi matsotsi kwete. Andida ngaandibate pa0774 590 914.
Ndiri kutsvaga musikana ane makore 20 – 25 akanaka asiri pamushonga. Nhare yangu 0776 857 455.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 34 nemwana, ndinoda mukadzi ane makore 26-29. Nhamba dzangu 0785 405 903.
Ndiri mudzimai ane makore 32, ndinotsvaga murume asina mukadzi anoshanda uye ari pachokwadi. Handishoreke, nhare yangu 0773 922 816.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 22. Ari pachokwadi andida anondibata pa0715 794 239. Ndatenda.
Ndinotsvagawo mukadzi anoda zvekuroorwa ane mwana wake 1 kana 2. Ngaave ane makore 20 kusvika 30. Ndine makore 35 uye ndinobatika pa0783 247 570.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 36, ndiri pamushonga uye ndotsvagawo murume ari pamushonga ane makore 45 kusvika 50. Zvakawanda tozotaura pa0773 153 922.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 24 ndinotsvagawo mukomana anonamata ari pachokwadi ane makore 25 kusvika 30 asiri pamushonga seni. Ngaave anoshanda muHurumende. Andida ngaandibate pa0718 354 939, ndogara muHarare. Varume vevanhu kwete.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26, ndiri pamushonga uye ndinotsvakawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi asingashande. Ndiri mucross-border, ndinogara kwaMurewa. Nhare yangu 0782 052 579.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 2, ndinotsvagawo murume ane rudo seni anoshanda uye anoda zvemba. Anondida anondibata pa0773 995 277.
Ndapota ndinokumbira kuti vanhu vachirega kufona panhamba idzi 0776 535 380 nekuti ndakamuwana wandaida.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 kusvika 30. Anondibata pa0774 957 755.
Ndiri murume ane makore 36 nemwana 1, handinwi doro nekuputa fodya. Ndinoda mudzimai ane makore 19 kusvika 29 ane mwana 1. Ndobatika chero nguva pa0719 796 830.
Makadini veKwayedza? Ndiri kutsvagawo musikana ave kuda zvekuroorwa asi ngaave ane makore 30 zvichidzika. Zvizhinji totaurirana, nhare yangu 0712 508 857.
Ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 25. Ndine makore 25, anodawo zvekuroorwa asi asina chirwere ndibate pa0782 953 142.
Ndiri murume ane makore 39, ndinotsvaga musikana kana mukadzi asina mwana seni ane makore 25 kusvika 33. Andifarira ngaandibate pa0782 413 192, ndiri muChitungwiza.
Ndinonzi Nyaradzo Shoko, ndine makore 23 ekuberekwa. Ndinogara muGweru uye ndine mwana 1. Ndiri kutsvakawo murume ari pazvokwadi anoda kuroora ane makore 30 kusvika 35 ekuberekwa. Ndinowanikwa pa0734 998 192.
Makaita basa veKwayedza, ndakazomuwana wangu saka vose vaifona pa0784 214 574 chiregai henyu.
Ndiri mukomana wemakore 35 ndinodawo musikana kana mukadzi ane mwana 1. Vari pamushonga uye pachokwadi ndibatei pa0716 100 264.